परमेश्वरको राज्य​—यसले तपाईंलाई कसरी लाभ पुऱ्याउँछ भनी बाइबल अध्ययनबाट सिक्न सक्नुहुन्छ
तपाईंले अघिल्ला लेखहरूबाट यहोवाका साक्षीहरू परमेश्वरको राज्यलाई किन सबैभन्दा धेरै महत्त्व दिन्छन्‌ भनेर बुझ्नुभयो होला। परमेश्वरको राज्यले भविष्यमा ल्याउने केही आशिष्‌बारे पढ्दा सायद तपाईंको मन छोएको हुन सक्छ। तर यी प्रतिज्ञाहरू साँच्चै पूरा होला त जस्तो पनि तपाईंलाई लागेको हुनुपर्छ।
आफूले सुनेको कुरामा झट्टै विश्वास गर्नुको सट्टा त्यो कुरा सत्य हो कि होइन भनेर होसियार भई जाँच्नु वास्तवमा बुद्धिमानी कुरा हो। (हितोपदेश १४:१५) यसरी जाँच्नुभयो भने तपाईं पुरातन समयका बिरियालीहरूजस्तै * हुनुहुनेछ। तिनीहरूले पहिलो पटक परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार सुन्दा तुरुन्तै स्वीकारेका थिए, तर परमेश्वरको राज्य आओस् भनेर चाहेकोले मात्र त होइन। बरु आफूले सुनेका कुराहरू “सत्य हुन्‌ कि होइनन्‌ भनेर पक्का गर्न” तिनीहरूले होसियारीसाथ धर्मशास्त्र जाँचेका थिए। (प्रेषित १७:११) परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार वास्तवमा परमेश्वरको वचनमा नै आधारित रहेछ भन्ने कुरामा पछि तिनीहरू पक्का भए।
हामी तपाईंलाई त्यसै गर्न निम्तो दिन्छौं। यहोवाका साक्षीहरूले परमेश्वरको राज्यमा राखेको विश्वास बाइबलले सिकाउने कुरासित मेल खान्छ कि खाँदैन भनेर जाँच्न निश्शुल्क बाइबल अध्ययन गर्नुहोस् भनी हामी तपाईंलाई आग्रह गर्छौं।
बाइबल अध्ययन गर्दा तपाईंले परमेश्वरको राज्यबारे सिक्नुका साथै जीवनका महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको जवाफ पनि पाउनुहुनेछ। जस्तै:
हामी कहाँबाट आयौं?
के पृथ्वीको विनाश हुनेछ?
तर सबैभन्दा मुख्य कुरा बाइबल अध्ययनले तपाईंलाई “परमेश्वरसित नजिक” हुन मदत गर्छ। (याकूब ४:८) परमेश्वरसित नजिक हुँदै जाँदा कसरी उहाँको राज्यले तपाईंलाई अहिले मात्र नभई सधैंको लागि लाभ पुऱ्याउनेछ भनी तपाईंले बुझ्नुहुनेछ। आफ्नो बुबालाई गरेको प्रार्थनामा येशूले यसो भन्नुभयो: “अनन्त जीवन पाउन तिनीहरूले तपाईं एक मात्र साँचो परमेश्वरको अनि तपाईंले पठाउनुभएको येशू ख्रीष्टको ज्ञान लिइरहनुपर्छ।”—यूहन्ना १७:३.
^ अनु.4बिरिया पुरातन म्यासिडोनियाको एउटा सहर थियो।
तिनी किन परमेश्वरको राज्यमा चासो लिन्छिन्‌?
हालै फोलेक नाउँ गरेकी दस वर्षीया विद्यार्थीलाई स्कुलमा “मलाई संसारमा सबैभन्दा धेरै मन पर्ने कुरा” भन्ने शीर्षकमा एउटा निबन्ध लेख्न लगाइयो। फोलेकले त्यस निबन्धमा तिनी किन परमेश्वरको राज्यबारे अरूलाई बताउन मन पराउँछिन्‌ भनेर लेख्ने निधो गरिन्‌।
फोलेकले यस्तो लेखिन्‌: “परमेश्वरको राज्य एउटा वास्तविक सरकार हो। तर यो राज्य अदृश्य भएकोले चस्मै लगाउनु भए तापनि तपाईंले यसलाई देख्न सक्नुहुन्न!”
फोलेकले परमेश्वरको राज्यले ल्याउने आशिष्‌हरूमध्ये आफूलाई मन पर्ने केही आशिष्‌बारे लेखिन्‌। परमेश्वरको राज्यले समाधान गर्ने केही समस्याहरूको विषयमा तिनले यसो लेखिन्‌: “मानिसहरू घर नभएर सडकमा बस्नुपरेको र संसारका विभिन्न ठाउँमा केटाकेटीहरू भोकभोकै मर्नुपरेको देख्दा मलाई साह्रै दुःख लाग्छ। तर यशैया ६५:२१ पढ्दा म धेरै खुसी हुन्छु।” परमेश्वरको राज्यको शासनमा बाँच्ने मानिसहरूको विषयमा यो बाइबल पदले यस्तो प्रतिज्ञा गरेको छ: “तिनीहरूले घर बनाएर तिनमा बास गर्नेछन्‌, र तिनीहरूले दाखबारी लगाएर तिनका फल खानेछन्‌।”
परमेश्वरको राज्यले सधैंका लागि रोगबिमार हटाउने समयको पनि आफूले उत्सुकतासाथ बाटो हेरिरहेको कुरा फोलेकले बताइन्‌। आफ्नो निबन्धमा तिनले प्रकाश २१:४ उल्लेख गरिन्‌, जहाँ हामी यस्तो लेखिएको पाउँछौं: ‘परमेश्वरले तिनीहरूका आँखाबाट सबै आँसु पुछिदिनुहुनेछ अनि मृत्यु हुनेछैन, न त फेरि कहिल्यै शोक, रुवाइ वा पीडा नै हुनेछ।’ तिनले अन्तमा फेरि आफूलाई संसारमा सबैभन्दा धेरै मन पर्ने कुरा यहोवा परमेश्वर र उहाँको राज्यबारे अरूलाई बताउनु हो भनेर लेखिन्‌। यी सानी केटी परमेश्वरको राज्यलाई विशेष ठान्छिन्‌ भन्ने कुरा स्पष्ट छ।
तपाईंको विचारमा विज्ञानमा, मानव दर्शनमा वा पवित्र शास्त्रमा।